Even if … – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ, ဟိုဟိုဒီဒီ and tagged education, Expectation, future, Life, strength. Bookmark the permalink.
← budget စတေးရှောင်ခြင်း – ၃ (ဇာတ်သိမ်း)
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှ အသီးအပွင့်များ →
5 thoughts on “Even if …”
MrDBA | June 21, 2009 at 2:02 pm
ဘာသာပြန်လဲ ရတာဘဲလား။ (ဘာသာပြန်လိ်ု့ထင်လို့ ပြောလိုက်တာ မှားသွားရင် ဆောဒီး)
ကုမ်ရာသီသူ | June 21, 2009 at 2:13 pm
မှားပါတယ် ကိုကြီးဒီဘီရယ်>> အဲဒီပုလွေသံလေးကို MP3 Flash Player နဲ့ တင်ဖို့ကို ကြိုးစားပါသေးတယ်။ အဲဒါ တူညားကိုယ်တိုင် လုပ်ခဲ့တဲ့ ၃၀ မိနစ်စာ အင်တာဗျူးလေးပါခင်ညာ။
sin dan lar | June 22, 2009 at 1:50 pm
ဟီဟိ… သူလည်း လွဲတာပဲကိုများ… ကဒီဘီရယ်…။
ကုမ်ရာသီသူ | June 22, 2009 at 1:58 pm
ဟုတ်ပ စင်စင်ရယ်။ မြန်မာဖြစ်ပြီး မြန်မာဘာသာပြန်ထင်ရအောင် ရေးနိုင်တဲ့ ကိုယ့်အလွဲကိုပဲ ကိုယ် စိတ်ကုန်မိပါရဲ့။ 😦
ရွှေအောင် | June 23, 2009 at 3:11 pm
သံစဉ်မညီညွတ်တဲ့မောင်းကွဲသံကြီးကတော့ ဆက်ကြားနေရအုံးမှာပဲ.. နားသည်းခံထားပေါ့..